हो ची मिन्ह सिटी हवाई अड्डा: इतिहास, पूर्वाधार, शहर प्राप्त गर्न कसरी
र तपाईं scoreboard मा हेर्न थियो। हो ची मिन्ह सिटी (एउटै नाममा विमानस्थल, पाठ्यक्रम, तर त्यहाँ टैन पुत्र Nhat) धेरै पर्यटकहरु आकर्षित गर्छ। यो फ्लाई चार्टर र loukost। राजधानी, हनोई, साइगन कमसल हब यात्री यातायात लागि पनि विमानस्थल। यो बुझ्ने छ। Phan Thiet, Vung Tau,: सबै पछि, हो ची मिन्ह सिटी देखि भियतनाम मा सबै चिरपरिचित रिसोर्ट्स पुग्न सजिलो छ mui Ne, Nha Trang, Phu Quoc द्वीप। विमान र कम्बोडिया (रीप) बाट उड टाढा। तर आगमन मा पर्यटक के पाउनेछन्? यो रिसोर्ट गर्न विमानस्थलबाट जाने, साइगन जाँदै बिना ट्रान्जिट गर्न सम्भव छ? र भियतनाम को सबै भन्दा ठूलो हब हराएको प्राप्त कसरी होइन? यस लेखमा यसको बारेमा पढ्नुहोस्।
जब यो सबै भन्दा ठूलो कि देखा भियतनाम विमानस्थल? हो ची मिन्ह सिटी (त्यतिबेला शहर साइगन को पुरानो नाम थियो) अन्तिम शताब्दीको प्रारम्भिक 30-एँ यसको आफ्नै हब पायो। टैन पुत्र Nhat को गाउँमा यसको फ्रान्सेली उपनिवेश अधिकारीहरूले निर्माण, त्यसैले विमानस्थल र यसको नाम लिन्छ। समयमा भियतनाम युद्ध को रनवे अमेरिकी विमान लागि आधार रूपमा सेवा गरे। 2007 मा नयाँ टर्मिनल बनाइएको थियो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्राप्त गर्न थाले। र पुरानो भवन घरेलू यातायात लागि टर्मिनल सेवा गर्न थाले। चार मिटर द्वारा साझेदारी यी दुई भवन। निःशुल्क शटल को टर्मिनलहरु बीच प्रदान गरिएको छैन। हामी पैदल बाटो हटाउन, वा दस डलर लागि स्थानान्तरण आदेश गर्न आवश्यक छ। अब टैन पुत्र Nhat बारेमा सोह्र लाख यात्रु एक वर्ष लाग्छ। चाँडै नयाँ हब को निर्माण कार्य पूरा गर्ने योजना बनाए छ। हो ची मिन्ह सिटी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा मा 2015 लामो Thanh अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा को गाउँमा स्थित छ। यस मामला मा, टैन पुत्र Nhat पूर्णतया घरेलू यात्रु सेवा स्विच गर्नुहोस्।
रूस देखि साइगन प्राप्त गर्न कसरी
मास्को देखि Sheremetyevo र Domodedovo गर्न हो ची मिन्ह सिटी विमानस्थल धेरै नियमित उडानहरू उड। Scoreboard प्रस्थान हब को नाम, र आगमन शहर संकेत गर्दैन। साइगन रूस को प्रमुख शहर को धेरै चार्टर पठाए। तर यो केवल पर्यटक मौसममा हुन्छ। विदेशी वाहक को एक नम्बर धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्य मा उडानहरू प्रस्ताव। फ्लाई युरोप वा एशिया को शहर मा परिवर्तन संग हुन।
पूर्वाधार हब टैन पुत्र Nhat
राजधानी दक्षिण भियतनाम को एक धेरै सहज, तर धेरै ठूलो विमानस्थल छ। हो ची मिन्ह सिटी टैन पुत्र Nhat बारेमा नौ किलोमिटर देखि अलग। सार्वजनिक परिवहन गरेर शहर को केन्द्र प्राप्त गर्न। अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल यो स्थिति एउटा हब आवश्यक सबै सुविधा र सेवा छ। तर, तिनीहरूलाई केही नै भवन (उदाहरणका लागि, एउटा बायाँ-सामान कार्यालय र एटीएम) र सडक मा स्थित छैन। यस तटस्थ क्षेत्रमा त्यहाँ धेरै सभ्य कर्तव्य निःशुल्क छ, र भवन को हब देखि सडक मार्फत सपिङ्ग जटिल छ। वाइफाइ मात्र व्यापार हल छ, तर अन्य क्षेत्रमा कहिलेकाहीं राम्रो परिहाल्छ। त्यसैले के मा हो ची मिन्ह सिटी हवाई अड्डा आगमन रूसी पर्यटक गर्न? पहिलो तपाईं सीमाना नियन्त्रण पारित गर्न छ। त्यसपछि तल जानुहोस् भूमि तल को सामान को। कि पछि तपाईं हरियो वा रातो गलियारे भन्सार मार्फत जानु पर्छ। र अन्तमा, हल आगमन हल बाहिर जानुहोस्। सबै प्रक्रिया सामान्यतया 20 मिनेट भन्दा कुनै लाग्छ। तपाईं भियतनाम एयर यात्रा गर्ने योजना छ भने, तपाईं, अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल बाहिर प्राप्त गर्न सही बारी र हिंड्न 400 मीटर आवश्यक छ।
यो रिसोर्ट्स गर्न टैन पुत्र Nhat प्राप्त गर्न सम्भव छ
दुर्भाग्यवश, छैन। तपाईं हो ची मिन्ह सिटी विमानस्थल छोड्न र बस स्टेशन वा रेलवे स्टेशन प्राप्त गर्न आवश्यक छ। तपाईं साइगन मा रात बिताए गरेको हुन सक्छ। पर्यटकहरूले चिरपरिचित रिसोर्ट्स बस जान सल्लाह छन्। Ho देखि ची मिन्ह धेरै सहज रात सुत्ने बस, सिट भनेर लगभग तेर्सो बाहिर राखे यस्तो तरिकाले सुसज्जित छन् जसमा पठाए। एक पर्यटक "खुला-बास।" पनि छ बस लागि टिकट सानो छ, र मिसिन आफूलाई सहज, वातानुकूल, शौचालय संग सुसज्जित। टिकट यात्रा एजेन्सीहरू उपलब्ध, साथै ठूलो होटल को स्वागत छन्। नजिकैको रिसोर्ट्स (mui Ne, Phan Thiet र Vung Tau), तपाईं एक ट्याक्सी लाग्न सक्छ। तर यो खुशी प्रति कार एक सय डलर को एक औसत खर्च हुनेछ।
हो ची मिन्ह सिटी: विमानस्थलमा देखि प्राप्त गर्न कसरी
कारण र धेरै बस मार्गहरू शहर केन्द्र को हब गर्न निकटता। एक हात मा, खराब - त्यहाँ सधैं पनि लेट राति, साइगन प्राप्त गर्न मौका छ। किनभने विमानस्थलमा यो नजिक कुनै होटल। तर अर्कोतर्फ, अनुभवहीन पर्यटक भ्रमित प्राप्त र गलत मार्ग लाग्न सक्छ। फाम Ngu लाओ - सबैभन्दा जहाँ होटल को धेरै ध्यान छन् विदेशी पर्यटक क्षेत्र बीच लोकप्रिय। त्यहाँ मार्ग नम्बर 152. तपाईं बस "Cholon" रुचि हो भने जान्छ, तपाईं सार्वजनिक परिवहन द्वारा एक नम्बर 147. यात्रा धेरै सस्तो छ आवश्यक छ। यो यात्रा तपाईं एक चौथाई (तीन हजार दांग) भन्दा कम खर्च हुनेछ। टर्मिनलमा देखि बाहिर निस्कन को सही गर्न स्थित लंगरगाह बसें। तपाईं ट्याक्सी चालक बाटोमै गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। औसत मा, कार द्वारा एक यात्रा लगभग दस डलर खर्च हुनेछ। यो एक ट्याक्सी लेना अर्थमा बनाउँछ, तर तपाईं नजिकैको रिसोर्ट्स प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने। तर सस्ता motorikshi। तर यो सामान संग बोझ गर्ने छैन यात्री को लागि एक सुविधाजनक विकल्प छ।
कसरी फिर्ता प्राप्त गर्न
पनि बस वा ट्याक्सी द्वारा। हो ची मिन्ह सिटी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा चार फर्श हुन्छन्। पहिलो दुई - बे आगमन। तपाईं गल्ति यहाँ मिल्यो भने, भित्र माथिल्ला तलाहरू प्राप्त गर्न प्रयास छैन। यो असम्भव छ। दोस्रो र तेस्रो स्तरों बीच पारित छैन। यो बाहिर जाने र flyover चढ्नु आवश्यक छ। भ्याट फिर्ता, वा भ्याट फिर्ता, को प्रस्थान हल मा स्थित छ। पछि चेक-मा , तपाईं, पर्खने क्षेत्रमा तुरुन्तै अगाडि बढ्न सीमा नियन्त्रण पारित गर्न सक्नुहुन्छ, र कर्तव्य मुक्त दोकान मा हेर्न।
Etihad एयरवेज: समीक्षा। Etihad एयरवेज विमान जसको?
अस्ताना - अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा: इतिहास, वर्तमान स्थिति र संभावनाहरु
विमान सम्झना कसरी छैन: कति दर्ता रूस मा घरेलू उडान मा समाप्त?
आफ्नो हातमा एक डिजाइन बालकनी कसरी सिर्जना गर्ने?
"Vermoxum" कीडे अर्थ
सबै nuances र peculiarities - रोपण अङ्गुर
"युवा पार्क" समारा: ठेगाना। जहाँ समारा जाने
Previa chorionic - कारणहरू, लक्षण, उपचार।
BZHU: तालिका क्यालोरी उत्पादनहरु
Furosemide आधुनिक आहार सबै रेकर्ड तोडेर छ।
जरिवाना को गणना
प्राथमिक विद्यालय बच्चाहरु मा कक्षा मा ACU को गठन
घरमा रेचक औषधि छिटो-अभिनय। जडीबुटी, खाद्य पदार्थ, परम्परागत चिकित्सा को व्यञ्जनहरु